सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मुख्य नारा तय गरेर काम गरिरहेका बेला विकासका पूर्वाधार निर्माणको कामले खासै गति लिन सकेको देखिँदैन । सरकारी तहबाट टेण्डरमा गएका साना–ठूला आयोजनाको निर्माणकार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएर नागरिक निराश छन् । प्रधानमन्त्रीले समयमै आयोजना टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिइरहनुभएको छ । तर, काम गर्ने पक्षले परिणाम देखाइरहेका छैनन् । यस्तो किन हुन्छ ? कहाँ छ समस्या ? समाधानको उपाय के हो ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर पूर्वाधार विज्ञ प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलाई गोरखापत्र संवादमा निम्त्याएका छौँ । प्रस्तुत छ, उहाँहरूसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–
आचार्य : बिग्रेको संरचनाभित्र हामी सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यो नसक्ने विषय पनि होइन । हामीकहाँ डिजाइन त्रुटि एकदम छ । यहाँ जति पनि कन्सलटेन्ट छन्, सबै अदृश्य छन् । प्राविधिक क्षमता भनेको तीन तहमा हुन्छ । जनशक्ति इन्जिनियर निकाल्ने । इन्जिनियर एक्लैले बाटो, पुल बनाउने होइन, संस्थागत परिवेश र संरचना चाहिन्छ । त्यहाँ पद्धति छैन । पद्धति नभएपछि जस्तो गोल्डमेडलिस्ट भए पनि काम राम्रो हुँदैन । सिक्टा सिँचाइमा त्यही भएको छ । मुद्दा परेको छ । विश्व बैङ्क र एडीबीको पद्धति छ । त्यसैले उनीहरूले हाम्रा सचिव, सहसचिवलाई हकार्छन् । सरकारी निकायभित्र फाइल किन टेबलमा घुम्छ भन्दा पञ्चायतकालदेखि घरभित्रै डिजाइन गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी सडक विभाग, खानेपानी त्यसैगरी गठन भएका हुन् । हाम्रो सडक विभागमा कहाँ प्राविधिक छन् ? कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् । भएका इन्जिनियरहरूले टिप्पणी उठाउने र बिल पास गर्ने काम गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारका सचिवले गर्ने काम अर्ब रुपियाँमा हुन्छ तर पद्धति छैन । निर्माण व्यवसायीलाई पद्धतिले नै अनुशासिन र संरक्षित गर्छ । मन्त्रालयमा गएको फाइल महिनौँ घुम्नु भनेको कर्मचारी आफू बच्न खोज्नु हो । हस्ताक्षर नगर्दा भोलि कुनै त्रुटिबाट बच्छु कि भन्ने उनीहरूमा छ । सही नगर्दा कोही कारबाही गर्दैन, अनि किन सही गर्छन् ? तर, कुर्सीमा बसेपछि फाइलको निकास दिनैपर्छ । ठीक छ या छैन टुङ्गो लगाउनैपर्छ । आफूमा आत्मविश्वास छैन उनीहरूमा । तोरीको गेडामा प्वाल पार्ने हामीले ऐन कानुन बनाउँछौँ अनि समस्या समाधान
हुन्छ ? सरोकारवालालाई पारदर्शी र अनुशासित बनाऊँ । त्यसो नगर्दा आत्मविश्वास बढ्दैन ।
ज्ञवाली : पुँजीगत खर्च यो चौमासिकमा कम भएकै हो । जेठ १५ मा बजेट आउँछ, काम साउन १ देखि सुरु हुन्छ । डकुमेन्टेसनको काम सुरु हुन्छ यो अवधिमा । कुनै वर्ष बढी, कुनै वर्ष कम काम हुन्छ, यो स्वाभाविक हो । पहिलो चौमासिक अवधिको काम हेरेर हुँदैन । पूरै आर्थिक वर्षमा कति काम भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । हाम्रो प्रणालीमै खोट छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । एउटा बाटोका लागि ५० लाख रुपियाँको बजेट बनाएको हुन्छ तर निर्माण व्यवसायीहरू १५ लाखमै बनाइदिन्छु भनेर आउनुहुन्छ । सरकारले नै निर्माण कम्पनी चलाउने कुरा आएको सत्य हो । पहिले पनि थियो, बीचमा खारेज भयो । निर्माण व्यवसायीले गर्न नसक्ने आयोजना छन् भने त्यो सरकारी कम्पनीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने अहिले सरकारले महसुस ग¥यो । यो प्रक्रियामा छ, केही समय लाग्छ ।
गुणस्तरको कुरामा भूबनोटले पनि असर गर्छ । निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार बनेर गुणस्तरको काम गरिदिनुपर्छ । सरकारी अनुगमनमा कमजोरी छैन, काम गरिरहेकै अवस्था हो तर निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार भइदिनुपर्छ ।
सिंह : अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर काम गरेका छन् तर सफल छैनन् । हाम्रो व्यवस्थापन चुस्त नभएर, कममा बिडिङ गर्ने र पछि दाबी गर्न पाउनेजस्ता कारणले यस्तो भएको हो । मेलम्ची एउटा उदाहरण हो । सरकारले चाहेको भए, सरकार आर्थिक प्रलोभनमा नपरेको भए मेलम्ची उहिल्यै काठमाडौँमा आइसक्थ्यो । मस्र्याङ्दी, चिलिमे आदिमा आयोजनाभन्दा बढी पैसाको क्लेम (दाबी) देखियो । विदेशीलाई छुट छ, कमाएर गएका छन् । जहाँसम्म गुणस्तरीयताको प्रश्न छ, हामीले बजेटअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमा कालोपत्रे गर्दा त्यहाँ ड्रेन हुँदैन । विनाड्रेन काम गर्नुपर्ने हुन्छ । के–के सामग्रीको आवश्कयता छ, हामीले अध्ययन नगरेरै काम गर्छौं । गाउँको सडक उपभोक्ता समिति गठन गरेर गर्ने प्रचलन छ । त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि संलग्न हुन्छन् । तर पनि उचित काम हुँदैन । सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय आफँै काममा संलग्न भएपछि कसरी गुणस्तरीय काम होला ? हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएकै छैनौँ । अहिले बल्ल अर्ब रुपियाँको आयोजनामा काम गर्ने अवसर पाएका छौँ । अब बिस्तारै अभ्यस्त हुन्छौँ । संरचना र पूर्वाधार बनाउनेमा हामीले प्राथमिकता दिएका थिएनौँ, अहिले बल्ल आएर प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ । संरचनालाई सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिक नै छैनन् त सरकारले नै भनिरहेको छ । अनि कसरी आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेर काम गर्ला ? तर, जसरी आर्मीले अहिले लागतभन्दा बढीको काम लिएर ठेकेदारमार्फत काम गराइरहेको छ, सरकारी निर्माण कम्पनीले त्यस्तो बिचौलिया कामचाहिँ नगरोस् ।
आचार्य : पूर्वाधार विकास विद्यमान संयन्त्रले सफल गर्न सक्दैन । यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ होला । नीतिगत, व्यवस्थापनतर्फ हाम्रो बहस पनि मुखरित छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापनको काम त्यति सहज छैन । राजनीति, व्यवस्थापन, व्यापार, ठेकेदारदेखि सबै पक्ष एउटा आयोजनामा जोडिन्छन् । त्यहाँ अनिश्चितता हुन्छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि विधि र पद्धति नै चाहिन्छ । गलत प्रश्नको सही उत्तर निकाल्ने प्रयासमा हामी लागेका छौँ । सरकारी निर्माण कम्पनी खोल्ने कुरा त्यही हो । त्यस्तो कम्पनी खोल्न हुँदैन भन्ने होइन तर यसबारे सरकारको अध्ययन नै छैन भने आफँै निर्माण कम्पनी खोल्नु घातक हो । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । निजी निर्माण व्यवसायीले जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूसँग दक्ष जनशक्ति नै छैन, सुधार गर्नुपर्छ । नियन्त्रण, अनुशासन, प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्नुपर्छ । सँगसँगै सरकार–कन्सल्टेन्ट–निर्माण व्यवसायीबीच आपसी विश्वास चाहिन्छ । कर्मचारी सरुवा र फेरबदलले पनि समस्या पर्ने गर्छ । विदेशीले ठेक्का हेर्छ, विधि र पद्धतिको विकास हेर्छ । तर, हाम्रो यहाँ समस्यै समस्या छ सबैतिर । अब निर्माण व्यवसायीको बिजनेस मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ । आफ्नै प्रयोगशाला हुनुपर्छ । तपाईंहरूसँग अहिले पाँचजना दक्ष इन्जिनियर छैनन्, खै अध्ययन अनुसन्धान ? यसरी कसरी गुणस्तरीयता कायम हुन्छ ? हाम्रो देशका इन्जिनियर विदेशमा गएर राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, यहाँ किन उनैले राम्रो काम गर्दैनन् ? सयवटा निर्माण कम्पनी छन् भने त्यसलाई मर्ज गरेर पाँचवटा बनाउनुस् । क्षमतासहितको बनाउनुस् अनि न काम राम्रो हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । कानुनअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई जेल हालौँ । विधिको शासनको अनुभूति गराऊँ । नत्र सुधार सम्भव छैन ।
संयोजन : भउचप्रसाद यादव